2 VaKorinde – Bhaibheri Dzvene MuChiShona (BDMCS)
Category Archives: 2 VaKorinde
1 Pauro, mupostori waKristu Jesu nokuda kwaMwari, naTimoti hama yedu, Kukereke yaMwari iri muKorinde, pamwe chete navatsvene vose vari muAkaya yose: 2 Nyasha norugare ngazvive kwamuri zvichiva kuna Mwari Baba vedu naIshe Jesu Kristu. Mwari woKunyaradza Kwose 3 Ngaarumbidzwe Mwari naBaba vaIshe wedu Jesu Kristu, ivo Baba vengoni naMwari wokunyaradza kwose, 4 ivo vanotinyaradza pamatambudziko […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 VaKorindeLeave a comment on 2 VaKorinde 1
1 Saka ndakati mumwoyo mangu handingaitizve rumwe rwendo kwamuri runokutambudzai. 2 Nokuti kana ndichikuchemedzai, ndianiko achasara kuti andifadze kunze kwenyu imi vandinochemedza? 3 Ndakanyora nenzira iyi kuitira kuti kana ndasvika ndirege kutsamwiswa navaya vaifanira kundifadza. Ndakanga ndine tariro mamuri mose, kuti muchagoverana neni mumufaro wangu. 4 Nokuti ndakakunyorerai ndino kusuwa kukuru, nokurwadziwa mumwoyo uye nemisodzi […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 VaKorindeLeave a comment on 2 VaKorinde 2
1 Tava kutangazve kuzvirumbidza here? Kana kuti tinotsvaka here, savamwe, tsamba dzinoenda kwamuri kana dzinobva kwamuri dzinotirumbidza? 2 Imi pachenyu ndimi tsamba yedu, yakanyora pamwoyo yedu, inozivikanwa uye inoverengwa navanhu vose. 3 Munoonekwa kuti muri tsamba yakabva kuna Kristu, basa roushumiri hwedu, yakanyorwa, kwete neingi, asi noMweya waMwari mupenyu, kwete pamahwendefa amabwe, asi pamahwendefa emwoyo […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 VaKorindeLeave a comment on 2 VaKorinde 3
Pfuma iri muMidziyo Yevhu 1 Naizvozvo, sezvo tine ushumiri uhu kubudikidza netsitsi dzaMwari, hatiori mwoyo. 2 Asi takaramba zvinhu zvakavanzika uye nenzira dzinonyadzisa; hatishandisi unyengeri, uye hatiminamisi shoko raMwari. Asi pakuratidza kwedu zvokwadi, tinozvireverera muhana yomunhu wose pamberi paMwari. 3 Uye kunyange zvazvo vhangeri redu rakafukidzwa, rakafukidzwa kuna avo vari kuparara. 4 Vasingatendi vakapofumadzwa ndangariro […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 VaKorindeLeave a comment on 2 VaKorinde 4
Ugaro Hwedu hwoKudenga 1 Zvino tinoziva kuti kana imba yedu yapanyika yatinogara mairi iyi yaparadzwa, tine imba inobva kuna Mwari, imba isina kuvakwa namaoko avanhu, inogara nokusingaperi kudenga. 2 Pari zvino tinogomera, tichishuva kupfekedzwa muviri wedu wokudenga, 3 nokuti kana tichinge tapfekedzwa, hatizowanikwi takashama. 4 Nokuti kana tiri mutende ino, tinogomera uye tichiremerwa, nokuti hatishuvi […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 VaKorindeLeave a comment on 2 VaKorinde 5
2 VaKorinde 6
1 Savashandi pamwe chete naMwari tinokukurudzirai kuti murege kugamuchira nyasha dzaMwari pasina. 2 Nokuti iye anoti, “Ndakakunzwa panguva yenyasha dzangu, uye pazuva roruponeso ndakakubatsira.” Ndinokuudzai, zvino nguva yenyasha dzaMwari, zvino ndiyo nguva yoruponeso. Matambudziko aPauro 3 Hatiisi chigumbuso munzira yomunhu, kuti ushumiri hwedu hurege kuzvidzwa. 4 Asi savaranda vaMwari tinozvirumbidza pane zvakanaka munzira dzose: mukutsungirira […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 VaKorindeLeave a comment on 2 VaKorinde 6
1 Shamwari dzinodikanwa, sezvo tine zvipikirwa izvi, ngatizvinatsei kubva pazvinhu zvinosvibisa muviri nomweya, tichikwanisa utsvene pakutya Mwari. Mufaro waPauro 2 Tigadzirireiwo nzvimbo mumwoyo yenyu. Hatina munhu watakatadzira, hatina munhu watakanyengera, hatina munhu watakaitira zvisakarurama. 3 Handitauri izvi kuti ndikupei mhosva; ndakambotaura kare kuti imi muri mumwoyo yedu zvokuti tingagona kurarama kana kufa pamwe chete nemi. […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 VaKorindeLeave a comment on 2 VaKorinde 7
2 VaKorinde 8
Kupa kunokurudzirwa 1 Uye zvino, hama, tinoda kuti muzive pamusoro penyasha dzakapiwa naMwari kukereke dzeMasedhonia. 2 Pakati pokuedzwa kukuru, mufaro wavo mukuru nokushayiwa kwavo kukuru zvakaita kuti vape zvizhinji. 3 Nokuti ndinopupura kuti vakapa napavaigona napo, uye kunyange kutopfuura pavaigona napo. Vakaita zvose izvi nokuda kwavo, 4 vakakumbirisa kwazvo kwatiri kuti vawane mukana wokugoverana nesu […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 VaKorindeLeave a comment on 2 VaKorinde 8
2 VaKorinde 9
1 Handifaniri kunge ndichikunyorerai pamusoro poushumiri kuvatsvene. 2 Nokuti ndinoziva kuda kwamunako kuti mubatsire, uye ndakanga ndichizvirumbidza nokuda kwaizvozvo kuna veMasedhonia, ndichivaudza kuti kubvira gore rakapera, imi vari muAkaya makanga matogadzirira kupa; uye kushingaira kwenyu kwakamutsa vazhinji vavo kuti vapewo. 3 Asi ndiri kutumira hama kuitira kuti kuzvirumbidza kwedu pamusoro penyu nokuda kwenyaya iyi kurege […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 VaKorindeLeave a comment on 2 VaKorinde 9
2 VaKorinde 10
Kuzvidavirira kwaPauro pamusoro poUshumiri hwake 1 Nounyoro nokuzvidzora kwaKristu, ndinokumbira zvikuru kwamuri, ini Pauro, “ndinotya” zvikuru kana ndichitarisana nemi chiso nechiso asi, “handityi” kana ndisipo! 2 Ndinokukumbirisai zvikuru kuti kana ndichinge ndasvika kwamuri ndirege kuzova nokushinga kwandinofanira kuva nako kuna vanhu avo vanofunga kuti tinorarama namararamiro enyika ino. 3 Nokuti kunyange dai tichigara zvedu munyika, […]
Posted byadmin August 26, 2017 Posted in2 VaKorindeLeave a comment on 2 VaKorinde 10